Ungayenza kanjani isinki yakho yensimbi engagqwali icwebezele futhi ikhanye! - Amathiphu Nemibono Emihle!
ukuvutha ngesibhakela esimnyama sotshwala
kubhakwe imakharoni noshizi ngesobho soshizi we-cheddar
ingulube emnandi futhi emuncu nelayisi
ubhekeni ukhilimu ushizi nge-ritz crackers
kuthatha isikhathi esingakanani ukubilisa izigubhu zezinkukhu
Ungayenza kanjani isinki yakho yensimbi engagqwali icwebezele futhi ikhanye!
Ungayenza kanjani isinki yakho yensimbi engagqwali ikhanye!
Ngiyayithanda? Yinamathisele ku-SAVE & SHARE it!
Landela Chitha namaPennies ku-Pinterest ukuthola amathiphu amahle kakhulu, imibono kanye nezindlela zokupheka!
Shiya amathiphu akho amahle kumazwana angezansi!
ikhekhe le-oreo ne-fudge ice cream
Ingabe isinki yakho yensimbi engagqwali ibukeka ibuthuntu futhi ingenampilo? Khuhla ngalezi zinyathelo ezilula kusinki ophelele, ocwebezelayo! Uma usinki wakho unemihuzuko eminingi, ungahle ungakwazi ukuwususa kepha okungenani usinki wakho uzobukeka ehlanzekile impela!
Sula usinki wakho: Qiniseka ukuthi azikho izitsha, ukudla noma izinsalela. Geza yonke into ngamanzi ashisayo nensipho yesitsha.
umxube obomvu we-lobster cheddar bay bhisikidi
Thola okubi kakhulu: Uma unamabala amakhulu kakhulu, hlanganisa izingxenye ezintathu zikakhilimu we-tartar nengxenye eyodwa ye-hydrogen peroxide. Gcoba kancane ngendwangu ehlanzekile, engaholi noma isipanji. Ngisho namabala amabi kakhulu kufanele eze ngokushesha!
Hlikihla phansi: Ngena ngaphakathi kusinki umanzi bese ufafaza i-baking soda ngqo ensimbini. Ungangeza ujusi kalamula omncane noma usebenzise ilamula eli-1/2 njengesikhuhli sakho ukuthola amandla athe xaxa kwi-baking soda yakho nokusiza ukukhipha iphunga (ngiyabonga uLaura P.)!. Yikhuhle phansi, ungene kuwo wonke amageza nezikhala, ikakhulukazi ezungeze ompompi. Sebenzisa ibhulashi lamazinyo ezindaweni eziqinile nesiponji esingaxegiyo okunye.
Susa izindawo zamanzi: Izindawo zamanzi kusinki wakho wensimbi engagqwali zikubeke phansi? Ungakhathazeki. Mane uwagcobe phansi ngeviniga elincane elimhlophe elicwebezelisiwe ukuze kukhanye okungayeki!
Bhuqa ngaphezulu: Bamba ithawula elithambile nelingenalutho bese uphonsa usinki wonke. Kuzokhanya sengathi kusha sha!
taco cwilisa izindlela ngomhlabathi yenkomo